Fifehezana sy fantsom-bilia, metisy fatorana, rafitra fantsom-pananganana PEX, fitaovana hydraulique, fitaovana fiasana fitaovana hafanana vokatra
Ny tompon'andraikitra dia efa vita ela be avy amin'ny fitaovana isan-karazany sy amin'ny haben'ny haben'izy ireo. Ny sasany dia hazo. Ny plastika koa dia nampiasaina hatramin'ny nananganana azy; Afaka mamolavola ny marika lava izy ireo fa tsy asiana soratra. Ny metal dia ampiasaina hanamboarana mpitondra matevina kokoa hampiasaina amin'ny atrikasa; indraindray ny sisin-dabozia dia tafiditra ao anaty tetezamita hazo iray mba hitehirizana ny sisiny rehefa ampiasaina amin'ny famolahana mivantana. Ny 12 na 30 cm ny halavany dia mahasoa ho an'ny mpitondra iray voatazona eo amin'ny birao iray mba hanampy amin'ny fanaovana sary. Ireo mpitondra karana dia mety amin'ny fitazonana ao anaty paosy.